ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်း ရုပ်သံတွင် အာရပ်အစီအစဉ် မှားယွင်းထုတ်လွှင့် | MoeMaKa Burmese News & Media
စာဖတ်သူတဦး၊ မီချီကန်၊ သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂
အမေရိကန်အချိန် သြဂုတ် ၉၊ ညနေခင်းက ဗီအိုအေမြန်မာစာမျက်နှာက နေ့စဉ်တီဗီသတင်းလွှာမှာ အာရပ်ဘာသာနဲ့ အစီအစဉ်တခုကို ထုတ်လွှင့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အာရပ်အစီအစဉ်မှာ အစ္စလာန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့ ဟောပြောချက်တွေကို အာရပ်စကား၊ အာရပ်စာတန်းထိုးနေတာကြောင့် ဗီအိုအေအစီအစဉ်က မြန်မာဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ရမယ့်အစား တခုခု နည်းပညာမှားယွင်းနေသလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ စကရင်ကို ဖမ်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယခု စာရေးနေချိန်မှာတော့ ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ	3 Responses to ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်း ရုပ်သံတွင် အာရပ်အစီအစဉ် မှားယွင်းထုတ်လွှင့် အောင်နိုင် on August 10, 2012 at 4:53 pm လုပ်ပေးရ မှာ ပေါ့ ခင်ဗျာ တို့က ဒေါ်လာယူထားပြီးပြီလေ…ဟုတ်တယ်မလား..ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ သီတင်းကို သီတင်း လိုပဲ တင်စေချင်တယ် ကိုယ့်နဲ့ မတည့်တော့ မကောင်းတာများများ..ကိုယ့်နဲ့တည့်နေတော့ မကောင်းတာ မပါရလေအောင် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးတွေ မလုပ်မိပါစေနဲ့ဗျာ ။ ခင်ဗျားတို တစ်ခုတည်း သီတင်း ကြည့်စရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူကြီးမင်းတို့လည်း သိမှာပါ သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင် တဲ့ အမောင်လို လည်း မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျ.။ ပြောရရင်တော့ မျှမျှ တတ နဲ့ပြည်သူလူထု အကြိုး ဖြစ်စေတာတွေပဲ တင်စေချင်တယ်.။ ဥပမာ။ ။သမိုင်းလည်း မဖတ် ဖတ်တော့လည်း မှန်ကန်တဲ့သူ ရေးတာ မဟုတ်တဲ့စာတွေဖတ်ပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် မူဂျာဟစ် တွေ ဘက်က ဒေါ်လာစားပြီးေ၇းသားဖော်ပြတာမျိုးပေါ့ .။ နောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့။
Anne on August 11, 2012 at 11:56 am say NO to VOA
Bo Kyaw Thaung on August 11, 2012 at 8:26 pm ဖွတ်ထွက်တော့ တောင်ပို့မှန်း ထင်ရှားတာပေါ့။ လှေသူကြီးသတ် လှေကို ယူတဲ့ မိချောင်းအတွက် အခွင့်အရေးတွေ ဘာညာတွေ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း လျှောက်ပြောနေကြတာ အံ့ပါရဲ့။
အောင်သဇင် - အရှုံးကို သီးစုံထောပတ်ထမင်းနဲ့ဖုံးတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်	အောင်သဇင် - ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်	လှကျော်ဇော - ရခိုင်ရိုးမပေါ်က ကြယ်နီကြီး	ငြိမ်းချမ်းအေး - ပီတာဇော်မြင့် အမျိုးသားရေး အပင်းဆို့၍ တဒင်္ဂရူးသွားခြင်း	ဖိုးထက် - ဝေးသွားတဲ့ လမ်းမကြီး	တူမောင်ညို - ရုန်းကြွ တော်လှန်မည်လော ... အသုံးချ နာခံမည်လော	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ဇင်လင်း - စိန်ခေါ်မှုများနှင့် စစ်ခင်းသူ	ကာတွန်း ဘီရုမာ - သင်္ကြန်အမွေ	ဖိုးထက် - ဆင်ကလောင်များသို့	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများNay Myo Zin free again - on his own words
ကိုသန်းလွင် - ကျောင်းဆရာ
စာပဒေသာ ကောက်စာများ၂ ၀ ၁ ၃ က ဗျာတ ပ် မတော် သ စ် အ တွ က် အ မိ န့်မင်းတာရာ - စစ်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရေ ...
Maung Swan Yi (48)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (86)
Han Thit Naing (74)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (188)
ကာတွန်း – အောင်မော် (61)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (150)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (605)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (207)
Cartoon Box (1,520)
Twitter: moemakaကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၅ကို အကြို စောငို၏ ကာတွန်းဟောင်းများ (၄) http://t.co/flLJF5MGKE 11:12:54 AM March 30, 2015 ReplyRetweetFavoriteနေ၀န်းနီ(မန္တလေး) – သံမဏိ ကြယ် ပြာ http://t.co/3DAvmNRtb0 10:43:57 AM March 30, 2015 ReplyRetweetFavoriteမတ် ၂၉ ၊ ၂၀၁၅ မြန်မာလူမျိူးစု မြန်မာ့အသံ (ဆစ်ဒနီ) မြန်မာစာ ပါမောက္ခ ဦးအေးမောင်ရဲ့ မညှိူးပန်း ကဗျာ… http://t.co/uMExRntbuK 10:20:42 AM March 30, 2015 ReplyRetweetFavoriteငြိမ်းချမ်းအေး – ‘ကယ်တင်ရှင် တပ်မတော်’ ဆိုတာ မရှိပါ http://t.co/91ZKZMmmLd 10:02:57 AM March 30, 2015 ReplyRetweetFavoriteဇာနီကြီး – စစ်မှန်သော ခေါင်းဆောင်များနဲ့ အံ့သြဘွယ် သူတို့အယူဝါဒ http://t.co/ftiYR6QCGL 10:49:45 AM March 29, 2015 ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
By admin ၂၀၁၅ နှစ်သစ်အတွက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ – မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အခု...Read more » Recent CommentsKhin Maung Saw on ခင်မောင်စော (ဘာလင်) – “ဗိုလ်” ဟူသောဝေါဟာရKo Zaw on စံပယ်ဖြူ – အဆင်မပြေမှုများနဲ့ မြန်မာပြည်Zarni Gyi on ဖိုးထက် – ဆင်ကလောင်များသို့San Hla Gyi on ခင်မောင်စော (ဘာလင်) – “ဗိုလ်” ဟူသောဝေါဟာရThet Tin on စံပယ်ဖြူ – အဆင်မပြေမှုများနဲ့ မြန်မာပြည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ